MUNAASABADA MAALINTA XUQUUQDA AADAMIGA SOOMAALIYEED, 22 JULY 2007
Marwooyin /mudanayaal: subax wanaagsan; waxaa sidaas waxaa hadalka ku bilowday Marwo; Maryam Xuseen Awreeye:
Waxaa na kulmiyay Munaasabadaha: Sannadguuradii 17-aad ee ka soo wareegtay Geeridii Marxuum Dr. Ismaaciil Jimcaale (Allaha u naxariistee), iyo Munaasabada Xuska Maalinta Xuquuqda Aadamiga Soomaaliyeed oo ku beegan Maanta oo ah, 22-ka July 2007.
Sawirka Guud Ee Xuquuda Aadamaha Soomaaliyeed
Xogwaranka xaaladda dhabta ah ee Xuquuqda Aadamiga soomaaliya ayaa tan iyo markii ay burburtay dowladii milteriga aheyd sanadkii 1991 ah mid aad looga murugoodo, Qatarta nabadgelyo la�aaneed ayaa ah mid sii baaheysa.
Waxaa jidadka ku yaala calaamado dhiiga ah oo laga daadiyay dad rayid ah oo aan waxba galabsan una eg mid sii socon doonta, maadaama aan leysu daba gelin fal dembiyeedyada la geysto.
Soomaaliya markaad maqasho waxaad xasuusaneysaa dil, caruur la xasuuqo, dagaalo abaabulan, qaraxyo, faraxumeyn, dhac, barakicin iyo afduub loogaysto dhamaan shacbiga soomaaliyeed qeybihiisa kala duwan, iyo hawlwadeenada ururada samafalda caalamiga ah intaas oo fal dambiyeedyo isbiirsaday ah ayaa isku duubkoodu ka dhigaya Soomaaliya meel masiibada xuquuqda aadamigu ka taagan tahay.
Shacbiga soomaaliyeed waxaa lagula kacay wax aan laqaadan karin oo maskaxada bani'aadamka fiyoow ogolaan karin kadib markii haybadii qaran-nimo meel aad u hoosaysa la dhigay oo ay jabhado hubaysan nidaamkii dawliga ahaa ku badaleen nidaam qabiilaysi ah oo laga dhaxalay dagaalo joogta ah oo maalin walba weji cusub iyo dana gaar ah leh taasi waxay ka marqaati kaceysaa in la galay dembiyo dagaaloo culus oo lid ku ah xaquuqda aadanaha.
Markii la waayay maamul midaysan oo leh saab xiriirsan uu udub dhexaad u yahay ka dambeynta sharciga ayey xaaladda dhabta ah ee xuquuqda adamiga soomaaliyeed noqotay mid aafooyin iyo nasiibdaro hareeyeen.
Sida aad la socotaan, sanadkan waxaa Somaaliya ka dhacay dagaalkii ugu cuslaa ee soo maray ebed Dalka mudadii dawlad la�aantu ka jirtay dalka soomaaliya, kaasoo reebay fajaciso iyo anfariir waayuhu xusi doonaan. Dagaalladaas waxaa ka dhashay dhimasho xad dhaaf ah, naafo, barakac baahsan iyo burbur hantiyeed oo weyn, Dhammaan xadgudubyadii ka dhashay dagaalladaas ayaa uga muuqda wejiyada shacabka Soomaaliya si rajo beel ah.
Hadda waxaa jira dawlad dhexe oo federal ah oo la daalaa dhacaysa nabad kusoo celinta dalka Soomaaliya. Waxaa kaloo jira mucaarad hubaysan oo muuqda kana soo horjeeda dawladda. Waxaa furan hal wadiiqo oo looga gudbi karo caqabadaha iyo xadgudubyada baahsan ee ka jira Dalka Soomaaliya, taasoo ah in la hormariyo dib u heshiisiinta iyo isu tanaasulka ayadoo sal looga dhigayo xushmaynta xuquuqda aadamaha.
Marka s�uaasha wayn ee hada na hortaala waa sidii loo abuuri lahaa dhaqan cusub oo siyaasadeed lana jaanqaada baahida soomaalida, tiiyoo sal looga dhigayo qiyamka xukun dawlad wanaaga ah,ka qayb-galinta bulshada talada dalka iyo daryeelka xuquuqda aadamaha .taasi waxay baabi�inaysaa ama meesha ka saareysaa dhaqamadii guracnaa ee laga dhaxlay nidaamkii hore iyo fawdadii daba tiilay ee ku salaysnayd aragagaxa, jaah wareerka siyaasadeed iyo ku uruurinta talada dalka qof keliya.
Xarunta xuquuqda aadamiga ee Dr. Ismaaciil Jumcaale oo ka faaiideysanaysa munaasabadan 22-ka July 2007 waxay soo jeedinaysaa:
1. Shacabka Soomaaliyeed, Dawlada FKMG ah iyo kooxaha kasoo horjeeda siyaasada DFKMG ah in ay ka shaqeeyaan horumarinta nabadda,iyo dhowrista xuquuqda aadamiga;
2. in dhinacyada isku haya siyaasadda soomaaliya ay khilaafaadkooda ku xalliyaan si nabad ah ayagoo u turaya shacabka isla markaana fiirinayana duruufaha qallafsanooy ku nool yihiin;
3. xaruntu waxay ka codsanaysaa bulshada caalamka in ay garab istaagaan kaalmeeyaanna dadka Soomaaliyeed ee ku waxyeelloobay ama ku barakacay nabad la�aanta ka jirta Soomaaliya.
4. Xaruntu waxay kaloo ka codsanaysaa hay�adaha u dooda xuquuqda aadamiga in ay il gaar ah ku hayaan xadgudubyada baahsan ee ku dul dhacaya dadka Soomaaliyeed.
Marwo; Maryam Xuseen Awreeye